Tartanka Orodka gaaban oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Tartanka Orodka gaaban oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
Tartanka Orodka gaaban oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Galmudug oo baaritaano caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah u sameysay caruur iyo haween danyar ah.
Next articleRa’iisul wasaare Kheyre oo Ciidankii Fashiliyay qaraxyadii Shalay abaal marino guddoonsiiyay